ठूलो को ? | गृहपृष्ठ
Home तीतो मीठो ठूलो को ?
on: १ चैत्र २०७५, शुक्रबार ०८:२७ तीतो मीठो
राजपाले संविधान संशोधन गर्न भनेर सरकारसँग किचकिच गर्‍या गर्‍यै गरेपछि सरकारले पनि ‘मधेशमा तिमीभन्दा ठूलो त अर्कै छ’ भन्ने प्रमाणित गर्न सीके राउतसँग अंकमाल गर्‍यो । राजपा जिल्ल परिराछ । यता ‘प्रचण्डको माओवादीभन्दा मेरै ठूलो हो’ भनेर विप्लवको माओवादीले देशमा विस्फोट गराउँदै हिँडेको थियो । तर, बाहिरको भन्दा सरकारभित्रको माओवादी नै ठूलो हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्न होला सरकारले विप्लवको पार्टीमाथि नै प्रतिबन्ध लगाइदियो । यसरीे हँसियाले हथौडालाई हिर्कायो ।
जसले जे भने पनि जनताभन्दा चैं नेतै ठूला हुन् है । सत्तामा बस्दासम्म ठूलै भत्ता पाउने भएसी नेता त ठूला हुँदै जाने नै भए । शासन गर्ने भनेर भाषण मात्र गरे पनि चलेकै छ । राष्ट्रियता भन्दा जातीयता चल्ने, जुट्न भन्दा फुट्न सजिलो भएसी नेता ठूला हुँदै जाने नै भए ।
बेलाबेलामा नेपालका ठूला भनिएका राजनीतिक दलका ठूले नेताहरूबीच ‘कसले चैं ठूलो माला लाउने’ भनेर अघोषित प्रतिस्पर्धा नै चल्छ । किनकि ‘तँ भन्दा म ठूलो’ भन्ने प्रमाणित जो गर्नु छ । यता अस्थायी सरकारका मन्त्रीहरू र स्थायी सरकारका सचिवहरूबीच को चैं साँच्चीकै ठूलो हो भनेसरि विवाद, आरोप, प्रत्यारोप पनि बेलाबेलामा चलिरहन्छ । केही समयअघि खानेपानी मन्त्री र सचिवबीच जुहारी चल्यो । त्यसपछि पर्यटन सचिवलाई पनि भारतबाट ल्याएको बिजुली बसलाई चीनबाट आएको हो भनेर प्रमाणित गर्न माथि ठूलाबाट ठूलै दबाब आए पनि काम नगरेको भनेर खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा भयो रे । यसरी सचिवहरूले आफूभन्दा ठूला अर्थात् मन्त्रीको इशारामा नचल्दा सरुवा हुनुपरेको बताइन्छ । पछिल्लो समय सचिव फेरिने क्रम निरन्तर छ । गत ६ फागुनमा मात्रै सरकारले करीब आधा दर्जन सचिवलाई सरुवा गरेको थियो ।
देशमा जुटको खेती गर्नुपर्नेमा, झूटको चैं खेती धेरै फस्टाएका कारण को ठूलो हुने भनेर जुँगाको लडाइँ त चल्ने नै भयो । जुँगाको लडाइँकै क्रममा एक महीनाजति अघि १५ प्रहरीको एसपीबाट एसएसपीमा प्रमोशन हुँदा हरि हरायो भन्ने पनि सुनियो । अहिलेको चक्रपथ बाहिर अर्को ठूलो चक्रपथ बनाउने भनेकोमा ‘ल्याण्ड पुलिङ’ गर्नुपर्नेमा ‘लेग पुलिङ’ बढी हुन थालेपछि त्यो काम पनि रोकिए जस्तो छ । झुपडीहरू बरू आफै परिवर्तन हुँदै गाछन्, तर खोपडीहरू परिवर्तन हुने छाँटकाँट कतै देखिन्न ।
यस्ता कुराहरू देखेपछि एउटा प्रश्नले बारम्बार लखेटिरहन्छ कि काम गर्ने कल्ले हो, गराउने कल्ले हो ? देशमा को चैं ठूलो हो ? कल्ले भनेको कल्ले मान्नुपर्ने हो ?
दलहरूमा प्रत्येक नेता अर्को नेताभन्दा आफूलाई अब्बल र ठूलो सम्झन्छन् । त्यस्तै, दलका नेताहरूभन्दा सरकारमा बस्नेहरू आफूलाई धेरै नै ठूलो सम्झेर व्यवहार गर्छन् । सरकार अर्थात् कार्यपालिकाभन्दा व्यवस्थापिकामा पुगेकाहरू विधायक अर्थात् देशको नियम, कानून बनाउने भएकोले आफूलाई ठूलो सम्झने नै भए । न्यायपालिका त झन् ती कानूनहरूको व्याख्या गर्ने निकाय भएकोले स्वतः ठूलो भैहाल्यो । त्यस्तै, चौथो अंगको बिल्ला भिरेको मिडिया पनि के कम, ऊ त यसै आफूलाई ठूलै ठानेर त होला, बेलाबेलामा फुकेको राँगोको व्यवहार गर्न बेर लाउँदैन ।
त्यसो भए ठूलो को त सांसद, मन्त्री कि कर्मचारी ? यी तीनै थरी त्यहाँ पुगेका त जनताका लागि काम गर्न भनेरै हो । यसको मतलब सांसद, मन्त्रीभन्दा जनता ठूला हुन् त ? हो भनौं, जनताको कहीँकतै भाउ देखिँदैन । चुनावका बेला नेपाली नेताले घाँस दाउरा गर्न एकाध सघाएको त सुनेको हो । बरू भारतमा मोदीले एकचोटि भए पनि सफाइ मजदूरको खुट्टा सफा गरेको फोटो भाइरल भएको थियो । नेपाली नेताहरुले त पाए बरू मोटरमै बसीबसी भोटरबाट आफ्नोे खुट्टा चैं धुलाउँथे होला । तर, यहाँ त पानीको अभाव छ र पो । त्यसैले खुट्टा सफा गर्ने कुरा त छोडौं, पाए खल्ती चैं साफ गर्थे होला । यो भिन्दै कुरा हो कि, धूलो धूँवा छ र पानीको अभाव छ र त देशभित्र र अझ शहरभित्र बसेको अनुभव भइरहेको छ, हामी सामान्यजनलाई ।
हुन त अभाव मात्र छैन यहाँ । यहाँ लूट, फुट र गुट, उपगुट पनि छन् । हामीसँग भूमि छ, भूमिसुधार र भूँडीसुधार पनि साथसाथै छ । कर सुधार गरेर घर सुधार्ने काम पनि साथसाथै भइ नै रहेको छ । श्रम सुधार गर्दा सन् अर्थात् छोराछोरीहरूको पनि उद्धार भइरहेको छ । सासु कोष मात्र होइन, आसु अर्थात् आर्थिक सुधार गर्ने कुराहरू चलिरहेकै छन् । हुँदै नभएका चैं होइनन्, केही विशेषताहरू बाँकी नै छन् देशमा ।
तर, जसले जे भने पनि जनताभन्दा चैं नेतै ठूला हुन् है । सत्तामा बस्दासम्म ठूलै भत्ता पाउने भएसी नेता त ठूला हुँदै जाने नै भए । शासन गर्ने भनेर भाषण मात्र गरे पनि चलेकै छ । राष्ट्रियता भन्दा जातीयता चल्ने, जुट्न भन्दा फुट्न सजिलो भएसी नेता ठूला हुँदै जाने नै भए । तर अन्तमा के त भन्दा, चुनाव भैहाल्यो भने फेरि नेताहरु जनताका घरघरमा भिक्षाटनमा निस्कनु पर्ने हुन्छ । यो देख्दा पञ्चतन्त्रको ‘मुसीको बिहे’ भन्ने कथामा रहेको ‘को ठूलो त’ भन्ने यस्तो एउटा प्रसंगको याद आउँछ ।
‘याज्ञवल्क्य ऋषिले आफ्नो तप शक्तिले एउटी मुसीलाई कन्या बनाएछन् । उसको बिहे गर्नुपर्ने भएछ । छोरीको इच्छाअनुसार ब्रह्माण्डमा सबैभन्दा शक्तिशाली र ठूलो वर खोज्ने कुरा भएछ । संसारमा ठूलो को हो त भनेर खोज्दै जाँदा सूर्य भगवान्को नाम आएछ । तर, सूर्यभन्दा बादल ठूलो, एवं रीतले बादलभन्दा हावा ठूलो, हावाभन्दा पहाड ठूलो भन्ने प्रमाणित हुँदै गएछ । अन्तमा पहाडलाई पनि खन्न सक्ने मुसा नै सबैभन्दा ठूलो हो भन्ने भएपछि उक्त कन्यालाई ‘पुनः मूषिको भव’ भनेर फेरि मुसीमा परिणत गरेर मुसासँग बिहा गरिएछ ।’
कुर्सी प्रधान देशमा
कालो धनमुखी प्रशासनमा
धन खाने मुसा नै ठुला ।
८ चैत्र २०७५, शुक्रबार ०७:४६
सीके राउतसँग सम्झौता
२६ फाल्गुन २०७५, आईतवार ०६:२२
२४ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार ०७:०५
१७ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार ०६:५७